Waa maxay waxa ugu horeeya ee ku soo dhaca maskaxdaada markaad maqashid "data kala iibsiga ka BlackBerry in iPad"? Waa hagaag, mid ka mid waan hubaa waxa ay noqon doontaa wax qaab ah "ma wax caynkaas ah run ahaantii way jiraan ?!" Si aad u jawaabaan su'aal ahay, haa sameeyaa iyo halka dad badan oo run ahaantii ma abid u baahan tahay inaad xog ka Blackberry ah si ay u gudbiyaan iPod, kuwii samayn ku yeelan karaan qallalku halis ah oo u cadhoodaan, sidii Google ma soo taagaa lahaa fursado badan.
Yeap, aad iga maqasheen xaq! Xogta habka wareejinta ka Blackberry ah in iPod ah waxay noqon kartaa buunbuuninayo dhab ah sababtaas. Ma jiro wax si toos ah si ay u gudbiyaan dhammaan xogta ku go hal. Sidoo kale sida Blackberry iyo iPod yihiin qalabka kala duwan iyadoo la isticmaalayo software lahaansho ka duwan, waxaa had iyo jeer waa arrinta qaab xogta incompatibility. Haddii aad tahay hanad computer ama ka soo jeeda ah in qaar ka mid ah khibrad farsamo ee degaanka waxaa laga yaabaa inaad in aad waddada iyada oo loo marayo nidaamka. Inta badan user caadiga ah si kastaba ha ahaatee, ma wax fikrad yar oo ku saabsan geeddi-socodka u tahay sabab la'aanta ah ee farsamo aqoonta.
Isagoo ka hadlayay jidka caanka ah ee xogta ka BlackBerry a wareejiyo, si fiican ma jiro. Waxaad isku dayi kartaa oo wareejiyo xogta ugu horeeyay ee aad laptop ka dibna si aad iPod adigoo isticmaalka Lugood laakiin in qaban doonaa oo kaliya waxyaabaha Xogo kooban oo sida music tusaale ahaan.
Xiriirada beddelashada ka BlackBerry in iPod
Kala beddelashada Music ka BlackBerry in iPod
Sawiro beddelashada ka BlackBerry in iPod
In la abuuro file kaabta BlackBerry
Si ka kaabta BlackBerry Soo Celinta iPod
Download BlackBerry Desktop Software ka http://mobilego.wondershare.com/ oo ku xidh si aad u computer ama laptop. Sidoo kale, rakibi Lugood si aad u computer ama laptop.
Connect telefoonka BlackBerry in laptop ama computer via cable USB ah
Tag Macluumaad Xiriirada. Dooro "Laba Jidka" ikhtiyaarka hoos "nidaameed Xiriirada".
Riix ah "nidaameed" doorasho iyo doorasho "Dhammaan Xiriirada iyo Groups".
Isku xiriiri iPod in ay kombiyuutarka via cable USB ah. Lugood Daahfurka
Dooro iPod ka "Qalabka" jeeda in Lugood. Tag Info nidaameed Xiriirada iyo aad xulan codsiga xiriiro.
Riix ah "codso" button, oo markaas "nidaameed" badhanka si ay u gudbiyaan xiriirada ka BlackBerry in aad iPod.
Connect aad BlackBerry iyo iPod si aad u computer ama laptop iyo abuurtaan Lugood.
Tag file dari maktabadda oo la helo heesaha oo aad ka Blackberry oo iyaga ku dari adigoo gujinaya iyaga on.
Hagaagsan aad iPod la Lugood iyo waxaad yeelan doontaa dhammaan faylasha music ka BlackBerry si aad iPod.
Si fudud ku xidha BlackBerry iyo iPod labadaba si aad u computer ama laptop taasi oo ka fiilooyinka USB.
Isticmaalka Windows Explorer, heshaan sawirro in aad rabto in lagu wareejiyo si iPod ka Blackberry ah. Press Ctrl + a in ay doortaan sawirrada ah oo dhan ama iyaga ka dooro mid mid by haysta hoos u muhiim ah wareejin sida aad riix.
Meel aad iPod ka Windows Explorer, oo paste dhammaan faylasha halkaas adigoo riixaya Ctrl + c.
Wondershare MobileTrans qaadataa daryeelka oo dhan dhibaatooyin la xiriira xogta wareejiyo habka u dhaxeeya inta badan noocyada kala duwan ee qalabka. Iyada oo ay fududaato isticmaalka iyo muuqaalada caqli badan oo u baahan user in ay wax ka badan click hal samayn, Wondershare Mobile Trans waa tababare fiican android. Wondershare MobileTrans Dalab waa la jaan qaada labada Windows iyo MAC ka hawlgala nidaamyada.
Si aad u dajiyaan xogta si aad iPod ka BlackBerry isticmaalaya Wondershare MobileTrans waxaad u baahan doontaa faylka raad raac ah oo aad Blackberry. Isticmaalka file gurmad this, aad soo celin kartaa iPod oo ay leeyihiin dhammaan xogta wareejiyo waa in. Si aad u bilaabaan, sii wado sida lagu faray hoos ku qoran:
Feature ayaa ugu horrayn waxa weeyi codsigan waa in wareejinta xogta waa halis oo lacag la'aan ah iyo habka la dhamaystiro kaliya 1 click. The horumarinta ee codsiga ay hayo heerka sare ah ee xirfad halka horumarinta codsigan iyo sabab la mid ah dhammaan xogta ay ka mid yihiin xiriirrada, fariimaha, abuse chat, music, jadwalka iyo codsiyada sii qaab isku mid ah oo aan xitaa xoogaa la beddelo . Xitaa haddii user ee ma laha labada darbi ee gacanta codsigan waa caqli ku filan si loo badbaadiyo macluumaadka si ay PC ka halkaas oo lagu soo celiyay ka dib karaa on in qalabka kale ee la dhisay ee technology oo gebi ahaanba kala duwan. Iyadoo codsigan users leeyihiin tiro aad u weyn oo ah fursadaha iyo xogta sidoo kale lagu taageeray kartaa ilaa gal server codsiga si ay dhacdo in shil kasta oo gurmad waxaa jira si ay u taageeraan user taas oo ka dhigaysa codsigan xal mid xiriiri cayn kasta oo mobile ah dhufto ee horumarinta.
Download iyo rakibi Wondershare MobileTrans in aad laptop ama computer.
Marka la rakibo waa la bilaabay dhamaystiran software ah halka labada isagoo aad BlackBerry iyo iPod ku xiran si aad laptop ama computer taasi oo ka fiilooyinka USB.
In la abuuro BlackBerry file gurmad, doortaan "kaabta" ka menu guriga.
Waxaad heli doontaa shaashad la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey. Isticmaal menu xarunta ee shaashadda in ay doortaan waxyaabaha xogta in aad rabto in aad ka mid ah in gurmad ah adigoo sanduuqyada ay baahisey
Marka aad dhamaysid, dooro "Start Copy".
Geedi socodka abuurista gurmad bilaabi doonaan wax yar. Buuxinta nidaamka ku xiran tahay tirada xogta in gurmad ah.
Step1. Si ka gurmad ah in aad abuuray oo keliya soo celin iPod, u tag menu guriga oo guji "Soo Celinta".
Laga soo bilaabo hoos u soo dhaadhacay menu, xulo qaab gurmad file ka dibna ay helaan gurmad la doonayo file (ku jira kiiska, ka file gurmad BlackBerry).
Isticmaalka menu xarunta ee shaashadda, dooro alaabta xogta ka gurmad ah in aad rabto in lagu wareejiyo si aad iPod. Guji "Start Copy" marka loo sameeyo.
Sug ugu soo celiyo si uu u dhameystiro ka dibna jari lahaayeen qalab aad ka laptop ama computer. Dhammaan xogta aad ka BlackBerry hadda diyaar u noqon doona in aad in aad iPod.
Waa maxay nooca xogta aad rabto in lagu wareejiyo ka BlackBerry in iPod badan?
Delete nuqul Songs on iPod / iPhone / iPad Si fudud
Sida loo Undelete iPod xiriiri Photos
Sida loo Undelete Faylal ay ku iPod xiriiri 4 & 5 iPod taabashada
> Resource > iPod > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga BlackBerry in iPod